Isazisi se-Apple sinokwenziwa ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo | Ndisuka mac
Isazisi se-Apple sinokwenziwa ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo
Andiqondi ukuba ungumsebenzisi we iapile andazi ngoku I-ID ye-Apple yindlela yesango kuyo yonke into enento yokwenza nomsebenzisi wakho ngaphakathi kwendalo yeApple. Nge-ID ye-Apple unokufikelela kwidatha yakho, uthenge kwiwebhusayithi ye-Apple, uthenge kwiivenkile ezahlukeneyo zenkampani, kunye nokufikelela kwii-imeyile, iifoto kunye vula izixhobo.
Ngamafutshane, ukuba i-ID ye-Apple ibaluleke kakhulu kunokuba sicinga kwaye yiyo loo nto u-Apple uqobo, kule minyaka idlulileyo, ebephucula ukhuseleko lwayo ngokufika kwamanyathelo amabini, into eyenza i-ID ye-Apple ngamanye amaxesha ingafikeleleki umnini ngokuba ulibale izitshixo.
Eli nqaku liza kuba lelokuqala kwamanye amaninzi endifuna ukugxila kuwo uyenza kwaye ulawule i-Apple ID Kwaye kwezi veki zidlulileyo kuye kwakho amaxesha aliqela kuye kwafuneka ndiphambane ukuze ndikwazi ukuhlangula ii-ID ezithile ze-Apple kubasebenzi abasebenza nabo abalibele iipassword zabo.
Into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba i-ID ye-Apple, xa uthenga imveliso entsha ye-Apple, kusenokwenzeka ukuba sele unayo ngenxa yokuba uyenzile ngaphambili, kuba ayiloxesha lokuqala ukuba uthenge imveliso yeapile yokulunywa , okanye kuya kufuneka wenze i-ID entsha ye-Apple.
Kwimeko apho kufuneka wenze i-ID entsha ye-Apple kufuneka uyazi loo nto zintathu iindlela ezahlulwe kakuhle ukuze ukwazi ukwenza i-ID entsha ye-Apple:
Ukuba into oyithengileyo sisixhobo se-Apple esinjenge-iPad, i-iPhone okanye i-iPod Touch, unokwenza i-ID yakho yeApple kwisixhobo uqobo ukuba xa ufika kwiscreen esithile ubonakalisa ukuba ufuna ukwenza i-ID entsha ye-Apple ngelo xesha. Inkqubo yezi zixhobo iya kukukhokela kwiphepha lemibuzo liphela ukuze uphele usebenzisa i-ID esebenzayo ngokupheleleyo ye-Apple. Into efanayo iya kwenzeka kuwe kwimeko yokuba into oyithengileyo yi-Mac.
Ukuba awufuni ukuyenza kwifowuni, ungasebenzisa usetyenziso lwe-iTunes, zombini kwi-Mac nakwi-PC kwaye uhambe, xa isicelo sivulekile, kwimenyu ephezulu kwaye ucofe Iakhawunti> Ukungena ...
Okokugqibela, ukuba awunakho ukuba ne-iTunes kwikhompyuter yakho, nangasiphi na isizathu kwaye ufuna ukwenza i-ID ye-Apple ngaphandle kokuba nesixhobo esiphathwayo, ungangena kwiwebhu www.icloud.com kwaye ukusukela ngoku ungena Uya kubona ukuba kwiwebhu unokwenza i-ID ye-Apple.
Uyenze njani i-ID yakho yokuqala ye-Apple?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Isazisi se-Apple sinokwenziwa ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo
I-Feral Interactive ibhengeza iWarhammer 40,000: Ukuqala kweMfazwe yesithathu yeMac